Kusvirwa Kumusha | Kuchengeta Franchise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»Hasha kumba
Harmony kuImba ndeyemubhadharo-mubhadharo Franchise uchitsvaga vanamuzvinabhizimusi vane hanya kuti vamhanye kanzuru nanny uye yevanoshandira imba inoshanda. Yakavambwa naNorland-akadzidziswa nanny uye amai, Frankie Grey, yave ichipa masevhisi epamusoro ekuchengeta vabereki kuvabereki muLondon, UK nekune dzimwe nyika kubva 2004. Kubva nannies nanamukoti vanamukoti kuenda kune imwe nyanzvi yeruzivo, senge mobile crèche uye kubvunza kwevabereki. , Harmony kuKhaya inopa chaiyo yekuchengeta vana kumhuri, chero zvavanoda. Harmony kuKhaya vanonzwisisa kukosha uye rugare rwepfungwa runouya nevabereki vachiziva kuti vana vavo vanofara uye vakachengeteka. Ndokusaka nguva dzose zvinotora nguva yekunyatsofananidza nanny kana muchengeti wevana uyo akakodzera mhuri nekuda kwedu mubairo wekukunda network yeanny agency agency. Iyo Harmony kuKhaya brand inosanganisira network yeinobudirira Franchise mhiri kwe UK uye kune dzimwe nyika. Kushanda Harmony kuPamba Franchise kunopa mari inobatsira yekuwana mari uye yakavimbiswa Harmony kuPamhepo level yekuchengeta vana kuvabereki venzvimbo. Pamwe nenzvimbo itsva, pari zvino paine nhamba shoma yemikana yekutengesa. Kuti uzive zvimwe nezvedu nezve Franchise sarudzo, ndapota taura nesu.